Ilay vaky sambo | FJKM Amboniloha
Ilay vaky sambo
Vaky sambo ampovoan-driaka
Tany ampovoan-dranomasina làlina no vaky sambo ity namana iray. Alina ny andro, samy nanao izay haha-avotra ny tenany ny tsirairay.
Nahafihina hazo fisaka toa latabatra ity namantsika, ary natosiky ny onja ho eny amoron-tsiraka iray.
Avotra aloha fa saingy…
Vao tonga ny lehilahy, nijery ny manodidina, nitady ny namany sao misy hafa toa azy, fa tsy nisy. Nitazana izy, nikaroka fa tsy nahita na iza na iza, na inona na inona mety hamonjy azy. Izy irery no hany olombelona tonga teo amin’ilay nosy.
Teo izy no nahatsiaro an’Andriamanitra ka nivavaka. Indrisy anefa, fa nandeha ny andro fa toa tsy nisy valiny ihany ity vavaka. Nandritra izany, nangoniny ireo poti-javatra hitany teo amoron-tsiraka, sisa avy tamin’ilay sambo rendrika. Natambany ireo ka nahavitany trano kely tsizarizary iray. Niaro azy tamin’ny orana sy tamin’ny masoandro.
Indray andro, raha nandeha nitady hanina tany an’ivon’ilay nosy izy, dia nahatazana setroka nidonaka avy tamin’ilay toerana nametrahany ny lasiny.
Enga anie Jesoa tsy ny tranoko io mirehitra io !
Sady natahotra izy no nivavaka, « enga anie Jesoa tsy ny tranoko io mirehitra io ! ». Niazakazaka mafy izy niverina. Akory ny hatairany sy ny alahelony. May, kila, tsy misy ho raisina izay kely nanany. Resy izy, nitomany, nivazavaza tamin’Andriamanitra, fa na ny Tompo aza hono tsy mba namonjy azy.
Tsy takatry ny saina ny fomba fiasan’Andriamanitra
Ora vitsy taty aoriana, raha mbola tena ketraky ny alahelo ranamana, indro sambo kely iray niondrana teo amin’ilay nisy azy. Akory ny hatairany !!!
Toa tsy nino izy, nibadabada izy nanontany hoe : fa ahoana ? Inona no anton-dian’ireto olona ? Namaly ireto farany fa « nahatazana ilay fambara afo (na signal) nataonao izahay dia tonga hamonjy anao ».
Zava-mahagaga saro-pantarina izay tsy takatry ny saintsika
Efa nilaza ny Tompo rankizy fa haneho zava-mahagaga saro-pantarina izay tsy takatry ny saintsika raha miantso Azy amin’ny andro maha-ory isika. Jeremia 33:3
Aza maika hanome tsiny an’Andriamanitra, na rava aza izay noheverina ho hany harena ety an-tany. Tsy misy zavatra tonga tonga ho azy eo amin’ny fiainan’ny mino, fa ny Tompon’ny zavatra rehetra no mandahatra izany ho azy. Fa anjarantsika kosa ny maharitra amin’ny famonjena.
Catégories :	Dimy minitra	/ par AnjGab 2 octobre 2014
Tao an-tokatranon'ny mpitondra fivavahana iray no niseho ny tantara. Efa maty moa ramatoa vadiny ka dia izy mianaka irery sisa no...